धाइरिङमा पनि छाडेन पहिरोले: २५ घरपरिवार विस्थापित ! »
धाइरिङमा पनि छाडेन पहिरोले: २५ घरपरिवार विस्थापित !
धाइरिङ, १५ साउन। पहिरोका कारण उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङका २५ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । पहिरोले घरगोठनै पुरिने अवस्था आएपछि उनीहरु बास छाडेर अन्यत्र जान बाध्य भएका हुन् ।
चितवनमा अत्यावश्यक कामको लागि दिँदै आएको विशेष सवारी पास दिन बन्द